ग्राहकको बैंक खाताबाट १४ लाख गायब भएपछि...!
काठमाण्डौ । भविष्यमा चाहिएको बेला सजिलै उपलब्ध हुने र अन्य ठाउँभन्दा सुरक्षित हुने भएकाले तपाइँ–हामी मेहनतले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दछौँ। तर यसरी विश्वास गरेर राखेको पैसा बैंक खाताबाट एकाएक गायब हुँदा वा हराउँदा कस्तो होला ? पक्कै पनि आफ्नो पसिनाको कमाइ गायब हुँदा जोकोहीलाई सम्हालिन गाह्रो हुन्छ। यस्तै सम्हालिनै कठिन पर्ने...
पैसा नतिरी कहिल्यै नलिनु यी ५ सामान, बन्न सक्छ अशुुभ वा दुर्भाग्यका मुख्य कारण
काठमाण्डौ । हामी दैनिक जीवनमा कयौँपटक गल्तीहरु गर्न पुुग्छौँ। त्यस्ता गल्तीको प्रत्यक्ष प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्ने गर्दछ। जस्तो कि– हामी कहिलेकाहीँ जानी–नजानी यस्ता वस्तुहरु लिन पुुग्दछौँ, जसले जीवनमा कयौँ समस्या निम्त्याउने गर्दछ। शास्त्रमा केही यस्ता वस्तुहरुका बारेमा बताइएको छ, जुन यदि बिना पैसा दिएर लिइयो भने धनसम्बन्धी...
क्रेडिट कार्डमा लाग्छन् यस्ता ४ शुल्क, तर बैंकले बताउँदैनन्
काठमाण्डौ । यदि तपाइँलाई कसैले क्रेडिट कार्ड सित्तैमा पाइन्छ र त्यसमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन भनिरहेको छ भने उसले तपाइँलाई गलत जानकारी दिइरहेको छ । क्रेडिट कार्ड(फ्री क्रेडिट कार्ड)मा पाइने तमाम छुट तथा रिवार्ड प्वाइन्टहरुका बारेमा जानकारी दिने धेरै भेटिन्छन्, तर धेरै फाइदावाला क्रेडिट कार्ड नोक्सानको कारण बन्न सक्छ भनेर कसैले पनि...
यस्ता धनाढ्य शासक, जसका पालामा यो देशमा थियो सुनै-सुनको भण्डार, अहिले बन्यो कंगाल
काठमाण्डौ । बिल गेट्स, जेफ बेजोस र एलन मस्कजस्ता धनाढ्यहरु प्रायः आफ्नो सम्पत्तिलाई लिएर चर्चामा रहने गर्दछन्। यी धनाढ्यहरु पछिल्ला कयौँ वर्षदेखि विश्वको सबैभन्दा धनाढ्य भइसकेका छन्। तर यी तीनजनै धनाढ्यको सम्पत्ति जोडे पनि अफ्रिकाका राजा मुसाको बराबर पनि हुँदैन। क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयमा इतिहासका सहप्राध्यापक रुडोल्फ बुच...
चीनमा अब दम्पतीले ३ सन्तानसम्म जन्माउन पाउने
काठमाण्डौ । चीनले दुई सन्तानमात्रै जन्माउन पाउने कडा नियमलाई अन्त्य गर्दै अबदेखि एक दम्पतीले तीन जनासम्म बच्चा जन्माउन सक्ने घोषणा गरेको छ। सिन्ह्वा समाचार संस्थाका अनुसार सोमवार पोलिटब्यूरो बैठकमा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सो नीतिलाई स्वीकृत गरेका थिए। सो निर्णय १० वर्षको फरकमा गरिने हालैको जनगणनामा चीनको जनसङ्ख्या वृद्धिदर केही...
एकसय दिनमा ८ लाख मानिसको कत्लेआम, अनि माफी माग्यो फ्रान्सले......
काठमाण्डौ । नरसंहारलाई मानवताविरुद्धको सबैभन्दा ठूलो अपराध मान्ने गरिन्छ । मानव इतिहासको पन्नामा कयौँ यस्ता नरसंहारका घटनाहरु छन्, जसलाई चाहेर पनि बिर्सन सकिदैन । यीमध्ये सन् १९९४ अप्रिल महिनामा रुवान्डामा सुरु भएको नरसंहार हो । रुवान्डाको सरकारी आकँडाका अनुसार १०० दिनसम्म चलेको त्यो नरसंहारमा लगभग ८ लाख मानिसको हत्या गरिएको थियो...
मुम्बई टु दुुबई : ३६० सिटे विमान, यात्रु केवल एक, को हुन् ती व्यक्ति ?
काठमाण्डौ । शीर्षक पढेर र तपाइँको मनमा पनि उत्सुकता जाग्यो होला। यस्तै उत्सुकता उनको मनमा जाग्यो, जसले ३६० सिटर विमानमा एक्लै यात्राका मजा लिएका थिए। यो कहिले भयो ? कसरी भयो ? किन भयो ? यो सबै पढ्नुुभन्दा पहिले यो जान्नुस् कि न यो कुनै गलत धारणाका कारण भएको हो न कसैको गल्तीका कारण नै। यो जोसँग भएको उनी यसलाई केवल भाग्य खेलमात्रै �...
अदार पुनावाला: घोडाको व्यापारदेखि कोरोना भ्याक्सिन उद्योगका बादशाहसम्म !
काठमाण्डौ । भारतको भ्याक्सिन निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट भारत तथा विश्वका अन्य देशहरुमा कोभिसिल्ड भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । यो इन्स्टिच्युटमा ठूलो मात्रामा कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको उत्पादन भइरहेको छ । कोरोना संक्रमण देखापरेसँगै भारतका जनतामाझ पूनवाला सिरम इन्स्टिच्युटको नाम चर्चाको...
आखिर किन यो गाउँका मानिस हप्तौँसम्म मस्त निद्रा पर्छन् ? कारण थाहा पाएर छक्क पर्नुहुन्छ
काठमाण्डौ । बाँचुन्जेल अनेक देख्न र सुन्न पाइन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कजाकस्तानको कलाची गाउँ। कलाची एउटा सानो गाउँ हो। तर यहाँ मानिस विगतमा केही वर्ष भयानक रहस्मय समस्या भोग्न बाध्य भए। गाउँका झन्डै १५० भन्दा बढी मानिस हप्तौँसम्म मस्त निद्रामा पर्थे। यसरी सयौँ मानिसहरु हप्तौँसम्म मस्त निद्रामा पर्न थालेपछि गाउँका अन्य...
सत्ताको नशा: कुर्सी छाड्नुपर्दा संसदमा ताला,महिला प्रधानमन्त्रीको सपथ बगैंचामा
काठमाण्डौ । समोआ नामको एक देशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित महिलाले बगैंचामा टेन्ट लगाएर पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनुपरेको छ । त्यहाँको विपक्षी पार्टीले सत्ताबाट हट्न अस्वीकार गरी संसदमा ताला लगाइदिएपछि नवनिर्वाचित महिला प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो आपत आइलागेको हो । यो घटनाले सत्तामा पुगिसकेकाहरु हतपत बाहिरिन चाहँदैनन् र सत्तामा...
राष्ट्रपतिको योजनामा यात्रु बिमानको अपहरण, आलोचकलाई पक्रन आकाशमै घेराबन्दी
काठमाण्डौ । बेलारुसका राष्ट्रपतिको इशारामा एक यात्रुबिमान हाइज्याक गरिएको छ । सो यात्री बिमानलाई जमीनमा अवतरण गराउनका लागि आकाशमा लडाकू विमान पठाइएको थियो । विमानलाई गन्तव्यस्थल पुग्नुअघि नै अवतरण गराइएको थियो । पछिबाट मात्र खुलासा भयो कि सो विमानमा यात्रा गरिरहेका एक पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्नका लागि यो खेल खेलिएको रहेछ । यो...
सबै ठिकै थियो, फेरि कसरी पर्यो सिंगापुर र ताइवानमा कोरोनाको व्रजपात ?
काठमाण्डौ । सिंगापुर र ताइवान यी दुुई देशलाई कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पाएको सफलताका लागि उदाहरणका रुपमा इिने गरिन्छ। सिंगापुर र ताइवानमा यो वर्षको सुरुआतमा कोरोना संक्रमणका केसहरु लगभग शून्य बराबर देखिएको थियो। तर यो महिनासम्म आइपुुग्दा तस्बिर बदलिएको छ। दुवै देशमा कोरोना संक्रमणका केसहरुमा तीव्रता आएको छ।...
'प्रधानमन्त्री ज्यू ,यो चित्कार र शोककाबीच पनि तपाईंलाई निद्रा लाग्छ है !'
-टिपी भुसाल सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू नमस्कार ! म यतिबेला कोभिड पोजेटिभ संक्रमण भएर १५ दिन देखि होम आइसोलेशनमा (काठमाण्डौं) मै छु । यो १५ दिन बीचको समय म र मेरो परिवारले जीवनमा शायदै कहिल्यै बिर्सन नसकिने कहाली लाग्दो बज्रपातको सामाना गर्नु प¥यो । किनकी कोभिडको कारण चार दिन अघि मैले बुटबलमा मेरो सहोदर दाजु गुमाए अनि १५ दिन अघि...
‘कुलिङ पिरियड’ ले चीनमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा ७०%ले घट्यो, किन ल्याइयो यो व्यवस्था ?
काठमाण्डौ । पश्चिमा राष्ट्रहरुमा जस्तै सम्बन्ध बिच्छेदका घटना अत्याधिक बढेपछि चीन सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको छ। ययो कुलिङ पिरियडको व्यवस्थापछि चीनमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा यो वर्ष ७२ प्रतिशतले कमी आएको छ। चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २ लाख ९६ हजार सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा यो वर्षको पहिलो...
काठमाण्डौ । विश्वभर केही दिनयता इजरायलको नाम चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सन् १९४८ मा विश्व मानचित्रमा एउटा सानो यहुदी देशको रुपमा उदाएको यो देशले आफ्नो अस्तित्वका लागि बितेको ७० वर्षमा कयौँ लडाइहरु लडिसकेको छ । यी लडाइहले इजरायललाई विश्व जगतमा एउटा सवल राष्ट्रको रुपमा बलियो गरी उभ्याउन अहम् भूमिका खेलेका छन् । चारैतिरबाट मुस्लिम...